स्तन क्यान्सर - सबैभन्दा अध्ययन रोगहरु को एक। उहाँले किनभने अप छाती बनाउन Tissues, यो दुवै sexes मा नै छ, महिला र पुरुष दुवै उजागर। तथापि, स्तन क्यान्सर, लक्षण जो विभिन्न sexes प्रतिनिधिको मा समान छन्, अधिक धेरै अक्सर महिलाहरु मा निदान। किन? केही विशेषज्ञहरु यस, एक हर्मोन पृष्ठभूमि कारण महिला र पुरुष मा फरक छ भन्ने विश्वास गर्छन्। अरूलाई धारणा हो कि थप susceptible महिला मन को क्यान्सर कारण सबैभन्दा उन्नत गर्न, mammary ग्रन्थीहरूको बल्क। यो 1970 देखि अवस्थामा संख्या नाटकीय वृद्धि भएको छ मात्र ज्ञात छ। यो कारण वातावरणमा छ, श्रम को राशि, abortions संख्या मा वृद्धि, स्तन-रुचाउने अवधिमा कमी कम, जीवन को ताल को प्रवेग।
के छ स्तन क्यान्सर? को संकेत यो भयानक रोग नियमित मासिक चक्र सुरु भएको छ जो हरेक केटी थाहा हुनुपर्छ। तपाईं आफ्नो शरीर को एक स्वतन्त्र परीक्षा सञ्चालन गर्न एक साप्ताहिक आधार मा के आवश्यक छ जस्तै। किनभने प्रारम्भिक निदान को mammary ग्रंथि संरक्षण, बस पूर्ण रोग निको पार्न अनुमति दिन्छ र यो अंग काट्नु गर्न यो आवश्यक छ।
स्तन क्यान्सर को लक्षण के के हुन्? रोग को प्रारम्भिक चरणमा लक्षण बिना पास हुनसक्छ। तथापि, palpation सानो छाप, अक्सर अनियमित, आकार कुनै न कुनै, हार्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। केही हदसम्म पछि रक्तपातपूर्ण देखिन सक्छ निपल देखि छुट्टी, र छाप भन्दा vpadinka हुन्छ। यो ट्यूमर गर्न बोसो को कस कारण हो। स्तन क्यान्सर जसको लक्षण प्रारम्भिक चरणमा बिस्तारै वृद्धि यो एक अनियमित आकार दिने, को बस्ट deform गर्न सक्नुहुन्छ। यो heaviness, दुखाइ को एक भावना, ट्यूमर माथि छाला peeling वा केही ठाउँमा सुनिंनु लगाउँछ। तिनीहरूले अन्य, गैर खतरामा पार्ने जीवनको लागि रोग को संकेत हुन सक्छ किनभने यी सबै अप्रिय sensations आतंक कारण हुँदैन। तथापि, तपाईं आफ्नो डाक्टर सकेसम्म सम्पर्क गर्नुपर्छ: मात्र प्रारम्भिक निदान ग्यारेन्टी निको पार्न।
स्तन क्यान्सर लक्षण, धेरै फरक छ। तिनीहरूले एक जटिल वा भाग आफूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो निदान सबै विरामीहरु द्वारा अनुभव लक्षण केही हो:
• सुनिंनु र स्तन राता
को बस्ट • उल्लंघन छाला संरचना र आकार
• फलाम, विशेष गरी गर्दा छानिएको हात मा dimples को उपस्थिति
• बेचैनी दुखाइ, distension, heaviness
• निपल देखि तरल वा रगतको डिस्चार्ज
को लसीका नोड्स मा वृद्धि •, सामान्यतया armpits मा
• यस काँध वा बगल को सुनिंनु
स्तन क्यान्सर को उन्नत अवस्थामा लक्षण वृद्धि गर्छ। ट्यूमर, छाला सतहमा आउँछ देखिने हुन्छ, प्रहार फलाम परिवर्तनहरू रंग, पीडादायी हुन्छ। (- वृद्धि शायद) वजन मा शरीर को फल्स जोडले समग्र टोन, एक तीव्र थकानको, धारिलो कमी छ।
के ठीक यो भयानक रोग को कारण? वैज्ञानिक राय सधैं संमिलित छ, तर मुख्य जोखिम समूह महिला निम्न विभाग समावेश:
• जो नियमित अवधि छ गर्ल्स 12 वर्ष सुरु
• लेट (55 पछि) रजोनिवृत्ति को शुरू महिलाहरु
लामो समय को लागि • Nulliparous व्यक्ति मौखिक निरोधकों प्रयोग
• प्रतिकूल वातावरण गर्न हावा को विशेष गरी विकिरण वा रासायनिक दूषण उजागर,
एक भिटामिन कमी मानिसहरूले •, मोटोपना, underweight
यो भयानक रोग रोक्न सम्भव छ? संसारभरिका वैज्ञानिकहरू एकदम unanimously सम्भव छ भन्ने विश्वास। दस पटक घट्यो छ स्तन क्यान्सर को घटना को सम्भावना गर्न, सरल नियम पालन गर्न Suffice।
यी सरल नियमहरू:
• उचित, सन्तुलित पोषण, मापन, शान्त जीवन
• एक साप्ताहिक आत्म-परीक्षण, क्रमबद्घ चिकित्सा परीक्षा
• lovemaking। यो निपल हात साझेदार ओठ दुलार वा दूध ducts को उत्पादन स्तरवृद्धि गर्ने फेला परेन carcinogens को। जो छाती एक हप्ताको कम्तीमा तीन पटक दुलार, त्यसैले भाग्यमानी, क्यान्सर लगभग बिरामी छैन छ। साझेदार को अभाव मा Nipples आफूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ।
• तपाईंको आफ्नो स्वास्थ्य, मौसमी, पुरानो, अन्य रोगहरु को समसामयिक उपचार मोनिटर
Oncological रोग - यो एक वाक्य छ। यसलाई आधुनिक चिकित्सा को आगमन हो भने पनि रोगी जीवन र स्वास्थ्य बचत गर्न सक्षम छ: oncological रोगहरु को उपचार धेरै छन्, तिनीहरू सबै परीक्षण र प्रभावकारी छन्।
क्यान्सर immunotherapy। ओन्कोलजी मा Immunotherapy। ओन्कोलजी मा Irradiation: नतिजा
ब्रेन ट्यूमर: एक प्रारम्भिक चरण मा लक्षण। एक ब्रेन ट्यूमर को पहिलो संकेत
घर सजावटी सुँगुर: विवरण, फोटो
शरीर र अनुहार मा चिसो sores कस्तो व्यवहार गर्न
सन तेल। को जीव लागि उपयोगी गुणहरू
अभिनेता क्रिस कूपर: जीवनी, फोटो। सर्वश्रेष्ठ चलचित्रहरू र टिभी शोहरू